पीसीआर जाँचमा निजी ल्याबको मनपरी, चर्काे शुल्क तिर्न मञ्जुर नभए हुँदैन परीक्षण !
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना जाँच गर्दा लाग्ने शुल्कमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशन दिए पनि ५ नम्बर प्रदेशका प्रयोगशालाले फरक–फरक शुल्क असुल्दै आएका छन् ।
प्रदेशका प्रयोगशालाले तीनथरि शुल्क उठाएर कोराना जाँच गर्दै आएका छन् ।
गत भदौ २८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी र निजी प्रयोगशालाले २ हजार रुपैयाँमा पीसीआर जाँच गर्न शुल्क तोकेको थियो । तर प्रदेशको निजी ल्याबले सरकारले तोकेकोभन्दा झण्डै दोब्बर शुल्क लिएर पीसीआर जाँच गरिरहेका छन् ।
५ नम्बर प्रदेशमा ५ वटा प्रयोगशालाले कोरोना जाँच गर्दै आइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले तोकेको शुल्कमा कार्यान्वनमा कडाइ नगर्दा सर्वसाधारणले बढी पैसा तिर्न बाध्य छन् ।
नेसनल ल्याबले लिन्छ ३ हजार ८००
बुटवलको निजी प्रयोगशाला नेसनल प्याथ ल्याबले अहिले पनि ३ हजार ८०० रुपैयाँमा लिएर पीसीआर जाँच गरिरहेको छ । प्रयोगशालाका सञ्चालक शरद भुसालले सरकारले तोकेको शुल्कमा जाँच गर्दा आफूहरूको खर्च पनि नपुग्ने बताए ।
‘हामीकहाँ पीसीआर जाँच गर्न आउनेलाई हामी शुरूमै २ हजारमा जाँच गर्न सकिँदैन भनेर बिरामीलाई काउन्सिलिङ गर्छाैं,’ भुसालले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले तोकेको शुल्कमा जाँच गर्न सकिँदैन भनेर २ दिन त प्रयोगशाला बन्द नै गर्‍यौं । सबै क्षेत्रबाट जाँचका लागि दबाब आएपछि हामीले पुनः जाँच गर्न थालेका हौं । छुट्टै भवन भाडामा लिएका छौं । प्रयोगशालामा काम गर्ने १४ जना कर्मचारीलाई तलब, होटलमा बस्ने व्यवस्थादेखि उपकरण र विद्युत् खर्च कति उठ्छ अनि २ हजारमा कसरी जाँच गर्न सकिन्छ ?’ बिरामीले ३ हजार ८०० तिर्न तयार भएपछि मात्र आफूहरूले स्वाब लिने भुसाल दाबी गर्छन् ।
नेसनल प्याथ ल्याबले हालसम्म ५ हजार ४४७ जनाको पीसीआर जाँच गरिसकेको छ । दैनिक ८० जनासम्मको पीसीआर जाँच गर्दा नेसनलले दैनिक सरकारले तोकेकोभन्दा १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बढी शुल्क उठाइरहेको छ । जाँच गरिएका मध्येबाट १० प्रतिशतको रिपोर्ट पोजेटिभ आउने गरेको भुसाल बताउँछन् । नेसनल प्याथ ल्याबले साउन २६ गतेदेखि पीसीआर जाँच शुरू गरेको हो ।
बागेश्वरीमा सरकारले तोकेकोभन्दा पनि सस्तो
निजी क्षेत्रबाटै पीसीआर जाँच गर्ने बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको बागेश्वरी डाइग्नोस्टिक एण्ड पोलिक्लिनिक सेन्टरले भने १ हजार ९९० रुपैयाँमा पीसीआर जाँच गर्दै आएको छ । प्रयोगशालाका सञ्चालक विमल बुढाथोकीले सर्वसाधारणलाई सहजताका लागि भनेर सरकारले तोकेकोभन्दा पनि सस्तोमा पीसीआर जाँच गर्ने गरिएको बताए ।
‘शुरूमा ५ हजार ५००, त्यसपछि ४ हजार ४०० रुपैयाँमा जाँच गरियो । सरकारले २ हजार तोकेपछि हामी त्यसभन्दा पनि सस्तो हुने गरी १ हजार ९९० रुपैयाँमा जाँच गर्न थालेका हौं,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ त धेरै जाँच हुँदैन । कार्यालयमा रिपोर्ट लैजानुपर्ने र लक्षण भएकाहरू केही मात्र आउँछन् । सरकारले भनेको भन्दा बढी शुल्क लिए यहाँ कोही पनि आउँदैनन् ।’ बागेश्वरीले १ हजार ९५७ जनाको पीसीआर जाँच गरिसकेको छ ।
सरकारी प्रयोगशालामा २ हजारमै
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सरकारले २ हजार शुल्क तोकेको दिन नै आफूहरूले २ हजार ५०० रुपैयाँमा पीसीआर जाँच गर्ने बताए पनि भोलिपल्टबाटै २ हजार रुपैयाँमै जाँच गर्न थालेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले सरकारी अस्पतालले सरकारी निर्देशन पूर्ण पालना गरेको बताए ।
‘हामीले फिवर क्लिनिकमा ज्वरो रुघाखोकी र गर्भवतीको निःशुल्क पीसीआर जाँच गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘आफैं जाँच गर्न आउनेलाई हामीले २ हजार शुल्क लिएर जाँच गर्छाैं । २४–३० घण्टाभित्र रिपोर्ट दिन्छौं ।’
बाँकेको भेरी अस्पतालले भने अन्य प्रयोगशालाले ४ हजार ४०० रुपैयाँमा पीसीआर जाँच गर्दा नै शुल्क घटाएर २ हजार ५०० रुपैयाँमा जाँच गर्दै आएको थियो । अस्पतालका अध्यक्ष प्रमोद धितालले हामीले जनतालाई सस्तोमा पीसीआर सेवा दिएको बताए । गुल्मी अस्पतालमा पनि गत १ हप्तादेखि कोरोना जाँच थालेको छ । गुल्मीका सबै स्थानीय तहले बजेट खर्च गरी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवाले ‘कन्ट्रयाक ट्रेसिङ’मा परेकाहरूको मात्र स्वाब जाँच गर्छ ।
‘२ हजारभन्दा बढी लिन पाइँदैन’
पीसीआर जाँच गर्दा २ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले सरकारले तय गरेकोभन्दा बढी शुल्क नलिन निजी प्रयोगशालालाई पत्राचार गरिएको बताए । ‘हामीकहाँ निर्देशन आएको छैन । बढी शुल्क लिए भन्ने हामीलाई बढी शुल्क लिएको रसिदसहित आएमा हामी कारवाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । व्यावहारिक समस्याका नाममा सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी शुल्क असुल गर्न पाइँदैन,’ पौडेलले भने ।
प्रदेशमा संक्रमितको संख्या १० हजारभन्दा माथि
५ नम्बर प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार नाघेको छ । रुपन्देहीमा मात्रै २ हजारभन्दा बढी संक्रमित पुगेकोमा ६०० भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । लकडाउन खुलेपछि दिनदिनै नयाँ संक्रमित थपिने क्रम बढेको छ ।
प्रचण्डको प्रस्तावको भाषामै ओलीको आपत्ति, के भने आफ्न...
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाका कारण १९ को मृत्यु, १३ ...
निर्वाचित भएपछि व्यवसायी ढकालले भने : अब महासंघमा...
द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन गर्न भ्रमणमा आएको छुः ...
विमानस्थलमा चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई स्वागत गर्न गृहमन्त्री थापाले जोडे पाखुरा
एउटै मुद्दामा एकै न्यायाधीशको ३ फैसला, जितेकालाई हराइयो अनि फेरि जिताइयो !
‘जबजको चर्चा गर्दा तपाईंलाई हुने छटपटी र व्यग्रता देखेर म अचम्भित हुन्छु’
बीयर पिएपछि धेरै दूध दिने भैंसी !